Xagjirnimada iyo dhalinyarada maanta . � )Xagjirnimo :-- <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
waa in la'aamino fikri khladan oo aan toosneen islamarkaan lagu shaqeeyo Kaasoo ka ambaqaadaya , waxa ruuxu uu jecelyahay uu ku haminayo in uu sameeyo asgoo diinta islaamka usoomaraya kuna andacoonaya adilo liita ama saxiix aheen ..taasi waxa ey dhaawaceesaa sharafta islaamka waxa ay signal xun kabixneesaa in islaamku uu yahay diin xagjirnimo is-qarxin..islaamkuna taas mas'uul kama ahan �ee waa fal kudhisan laablakac
T Xagjirnimadu : waa waxa caalamka manta kajira oo kadhacay dalal xitaa aan islaam aheen sida yurub iyo mareekanka oo kale tusaale ..mad-habka looyaqano katholik ayaa waxaa
dhexmarijiray dagaalo culus mad-habka kale ee burutusteniga iyo kooxo kunool dalalka yurub oo u'tacusuba fikrado kala duwan ,waxaana ay kadhcday dalalka sida hindiya .taliyaaniga jermalka shiinaha iyo meeloka le �. � Islaamku : -waa diin dhexdhexaad ah iyo yusri oo wax culees ah malahan manajirto meel islamku uu kufarayo xagjirnimada balse waa uu kasoohorjeedaa xagjirnimada.
Astaamaha xagjirnimada iyo waxayaabaha sababa waa :- a) in ruuxo uu san aqoon dheer ulaheen diinta islaamka oo uu bowsaday culuumta
b) Ad adeeg aan munaasab aheen �� tusaale muwaadinka somaliyeed ee jooga dal qurbo miyay kubahoontahay in uu yirahdo waxaan suulinayaa filimada iyo munkarka iyo haweenka qaawan �sida dhacday taas loomaabahna waayo waxaadan awoodin weeye oo n.m.c.s.w. waxa uu leeyahay .
c) a xamaasad saa'id ah oo kudhisan laab lakac..� d) E Tacasub dheeraad ah oo kudhisan indhola'aan sida qabuurihii ay faageen
maxaakiimta islaamka ..taasna islaamku maqabee waa tacasub ra'yigooda ah .oo sida ay jecelyihiin ayay sameeyeen .. magaca iyo sumcadda islaamkana waa ay kuciyaareen .
e) � Takfiirinta umadda iyo mujtamaca iyo bulshada muslimka ah waxyaabo liita sida xijaabka ,iyo qaatka ama sigaarka iyo waxlamid ah. Wax fudud maahan in ruux muslim ah layiraahdo waa gaal ..oo ruuxiidhahay ayaa ahaanaya haddii uusan noqon kii lagutuuray gaalnimada ..waxa ay salfadeen culimadii iyo siyaasiyiintii iyo
ashkhaaskale oo waxa dhaheen waagaalo �acaadanallaahu minhaaa�. f) In lagu degdego xaaraamyeelidda �taasna dhaqanka culimadii hore ee salafka maahan tusaale haddi ..kitaabku uu qabo labo masalo midi ay tahay xaaraam tankalena ay tahay karaahiyo .. waxa ay qaadanayaa tan xaaraamta ah� haddii mid ay yusri kudhisantahay tankale ay kudhisantahay culeys waxa ay markasta qaadanayaa tan culus. g) Iyo in shacabka la'amro waxaan ilaah kulaasimin �. h) In asaga xagjiraha mooyee eysan jirin cidkale oo muslim fiican ah waa sida uu